သူ … သိစေချင်ပါသည် … (Ashin Dhamma Piya) | MoeMaKa Burmese News & Media
သတိတရားနဲ့နေပြီး အသိတရားနဲ့သေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ဘုရားရှင်က ချီးမွမ်းတော်မူတယ်လို့ စာတွေ ပေတွေထဲမှာတော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းမှာတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် အမြဲတမ်း သတိ တရားနှင့်နေဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ သတိမဲ့တဲ့သူဟာ အရာရာတိုင်းကို အရှုံးနှင့်ချည်း ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုကလည်း ရှိထားပြန်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအများကျင့်သုံးနေတဲ့ အတွေးအမြင် နဲ့တော့ တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နေပြန်တယ်။ လူတွေရဲ့စိတ်တွေထဲမှာ အရာအရာကို “ငါ”ဆိုတဲ့ မာန်မာနကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး “ငါ”ကချည်း အနိုင်ယူချင်နေကြတာ။ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ မထင်ရင် မထင်သလိုပြောမယ်။ မခင်ရင် မခင်သလို နှိပ်ကွပ်မယ်။ မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလို ဖိုက်မယ်။ ကိုယ်နှင့် သဘောထားမတူရင် မတူသလို အပြစ်မြင်မယ်၊ ဒီနောက် အပြစ်တင်မယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ ရန်သူလို သဘောထားပြီး အုပ်စုဖွဲ့၍ တိုက်ခိုက် မယ်။ လူ့တို့ရဲ့သဘာဝဟာ ဒီဘောင်၊ ဒီစည်းကို မကျော်လွန်နိုင်အောင်ပဲ ရှိနေတယ်။ ဒီသဘောသဘာဝတွေ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကို ကောက်ချက်ချကြည့်တော့ သတိတရားနည်းပါးလို့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်။
စာရေးသူဟာ ၂၀၁၂-ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃-ခုနှစ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်မှာပဲ အနေများခဲ့တယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ ပြန်ရောက်နေခိုက်မှာ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အလုပ်တွေထဲမှာပဲ စိတ်ကိုနှစ်မြှုပ်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ ကိုယ်လုပ်နေခဲ့တာဆိုတော့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဖရီးမောင့်မြို့မှာရှိတဲ့ မေတ္တာနန္ဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မစဉ်းစားမိခဲ့ပါ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဟိုရောက်နေခိုက် ဒီကအကြောင်း တွေကို တွေးပူနေရင်၊ ဒီရောက်နေခိုက် ဟိုကအကြောင်းတွေကို တွေးပူနေခဲ့ရင် စာရေးသူအတွက် အသက်ရှည်နိုင်စရာအကြောင်းတွေ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်လို့ပါ။ ဒီတော့လဲ ဘယ်မှာပဲနေနေ Don’t worry, Be happy ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲ နေခဲ့တယ်။
ထူးခြားတဲ့ တရုတ်ပြည်က ၈ နှစ်သား ကိုရင်လေး …
နောက်တစ်ခု ထူးခြားတာက စာရေးသူ တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးမှာ (“နှင်းမှုံတွေကြားက တရုတ်ပြည်ကြီး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နှင့် အပိုင်း (၁) (၂) ခွဲပြီး မိုးမခမှာရော၊ ကြေးမှုံသတင်းစာမှာရော ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သည်) ရှစ်နှစ်သား မဟာယာန ကိုရင်လေးတစ်ပါး စာရေးသူထံ သူ့ဆရာများနှင့်အတူ မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်။ စာရေးသူ ပီးကင်းမြို့မှာ တရားပြနေစဉ် အဲဒီ ကိုရင်လေးဟာ သူ့ဆရာနှင့်အတူ စာရေးသူထံရောက်လာခြင်းပါ။ သူတို့ရောက်လာတော့ စကားပြန်ဖြင့် အလ္လာပ၊ သလ္လာပစကား ပြောကြရင်း ကိုရင်လေးကို မြန်မာပြည်ကို လိုက်ပြီး ဘုရားစာတွေကို သင်မလားလို့ ရုတ်တရက် မေးလိုက်မိတယ်။ အဲဒီကိုရင်လေးဟာ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မိဘနှစ်ပါးကို သူမြန်မာပြည်ကိုလိုက်ပြီး ဘုရားစာတွေကို သင်လိုတဲ့အကြောင်း၊ ဆရာတော်တစ်ပါးက သူကို မြန်မာပြည်ကို ခေါ်မယ်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း မိဘများအား ပြန်ပြောပြတယ်။ နောက်နေ့မှာ ကိုရင်လေးဟာ မိဘများနှင့်အတူ စာရေးသူထံ ရောက်ရှိလာပြီး အခြေအနေကို လာရောက်စုံစမ်းကြတယ်။ မိဘများက သူတို့သားလေးကို ဆရာတော် ခေါ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ထည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့သားလေးကို ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာကို မေးမြန်းကြတယ်။
“ဆရာတော်ဘုရား မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်သွားရင် တပည့်တော်ကို မေ့သွားမှာစိုးလို့ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်အတူ ပုတီးလေးကိုပါ ဆရာတော်အား ပေးအပ်ပါတယ်။ ဘုရားစာတွေကို သင်ချင်လို့ တပည့်တော်ကို မြန်မာပြည်ကို ခေါ်ဖို့သတိရတော်မူပါ”တဲ့။ အကြောင်းအကျိုးတွေ တိုက်ဆိုင်လာခဲ့ပြီဆိုရမှာပါ။ အဲဒီ မဟာယာနကိုရင်လေးဟာ (၂၀၁၃-ခု၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့က) မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ စာရေးသူအတွက်တော့ သူကို စောင့်ရှောက်ရမဲ့ တာဝန်ဝတ္တရား တွေ ပိုိလာပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ သန်းပေါင်းတစ်ထောင်သုံးရာရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်ကြီး အတွက် အဲဒီကိုရင်လေးကို စာတတ်ပေတတ် ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်လာပြီး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတစ်ပါးဖြစ်လာအောင် စွမ်းနိုင်သမျှ စောင့်ရှောက်ပေးရမှာပဲ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရသဆောင်းပါးစုံ, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ, ဒေါက်တာဓမ္မပီယ
One Response to သူ … သိစေချင်ပါသည် … (Ashin Dhamma Piya)
OHN MAR MYINT on March 14, 2013 at 12:19 am
” Thar Du Thar Du Thar Du ” I was rally glad and appreciated what you have done and what you are doing right now for people and Buddha Thardanar.. I always wish that i may help and support to our country and people like you with heart and soul. I also hope and wish may you live long and healthy.
Ohn Mar Myint